Kaqeybgal tartanka Slowwalk oo ku guuleys 1000 euro | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | dhowr
Slowwalk waa sumad kabo loogu talagalay dhagaystayaasha dhallinta yar isku dayaya in ay sameeyaan wax ka duwan. Waxay u yimaadaan inay isugu yeeraan sidii astaan reer magaal ah taas oo dib u cusbooneysiineysa naqshada caadiga ah ee kabaha kabaha. Siinta qaab cusub. Hadda sumaddu waxay bilaabaysaa tartan ay kugu martiqaadeyso inaad kaqeyb gasho. Tartanka 'Slowwalk' wuxuu isku dayayaa inuu u keeno hal abuurro da 'yar oo u dhow astaantaada qaabab cusub.
Sharaxaaddooda waxay ka digayaan in calaamaddoodu had iyo jeer leedahay taabasho cagaaran. Sida wax ka duwan noocyada kale. Sida aad ku arki karto degelkeeda, waa xaqiiqo aan laga baxsan karin haddii aad rabto inaad guuleysato.
1 Yay u tahay iyo ujeedkeedu
2 Soo bandhigid iyo waqtiga kama dambaysta ah
3 Iyo tan ugu muhiimsan, maxay abaalmarintu ka kooban tahay?
4 Xeerarka tartanka
Yay u tahay iyo ujeedkeedu
Mabda 'ahaan ma jiraan xuduudo tartame. Qofkasta oo raba inuu kaqaybqaato, maadaama taasi ay tahay sababta aysan kuu weydiin doonin wax aqoon ah marka aad iska diiwaangelineyso tartanka Slowwalk. Haddii aad tahay arday, farshaxan ama shakhsi, waad ka qaybqaadan kartaa. Isku dhacani wuxuu ka dhashay tartankii muranka dhaliyay ee Metro Madrid oo aan maalin ka hor ku qornay Creativos Online. Si ka duwan tan waa shirkad gaar loo leeyahay, markaa sidaa laguma doodi karo.
Ujeeddada tartanka 'Slowwalk' ayaa ah in shaashad si xor ah loo qaabeyn karo. Iyagaa ku siinaya adigana wax ka bedel. Habka kabaha waxaa lagu magacaabaa Lafaha Slowwalk, kaas oo caan ku noqon doona isticmaalayaasha sumaddan. Waxay qiimeyn doonaan fikradaha ugu hal abuurka badan ee ay tixgeliyaan. Waxaa ka mid ah, seddex qaybood:
(1) Lafaha Man
(2) Lafta Naagta
(3) Lafaha Unisex
Xaddidaadda kaliya ee 'Slowwalk' waxay u baahan tahay in shan naqshad oo keliya qofkiiba waa la soo bandhigi karaa. Haddiise ay ahaato koox dad ah, mid uun baa magacooda ku qori doona magaca kooxda. Sidaas darteed abaalmarinta ayaa loo qaybin doonaa dadka ku jira iyo mudnaanta.
Soo bandhigid iyo waqtiga kama dambaysta ah
Sawir gacmeedka waxaa lagu sameyn karaa aaladaha analogga ah (calaamadeeyayaasha, qalinka, iwm) iyo sidoo kale kuwa dhijitaalka ah (eeg sawir-qaadaha, sawir-qaadaha). Ka tarjumaya fikradda ku saleysan shaxanka la soo dejisan karo. Waqtiga kama dambaysta ah wuxuu noqon doonaa laga bilaabo 28-ka Maarso ee sanadkan illaa 28-ka May, 2018. Haddaba, aan iska dhaqaaqno!
Iyo tan ugu muhiimsan, maxay abaalmarintu ka kooban tahay?
Ku guuleystaha tartanka Slowwalk waxaa la siiyaa abaalmarin lacageed oo dhan kun euro (€ 1.000) iyo safar wareeg ah oo lagu tago Elche iyadoo kharashka cuntada iyo hoyga lagu daray. Tani waxay noqon doontaa in la arko warshadda iyo hannaanka ay u sameyn doonaan kabaha guuleysta. Ku guuleystaha ayaa abaalmarintan heli doona, laakiin macnaheedu maahan inay iyagu keliya yihiin.
Waxaa jiri doona 8 tixraacyo dheeraad ah oo loogu talagalay dadka sidoo kale yeeshay naqshad xiiso leh, laakiin maahan guuleyste. Kuwani waxay ahaan doonaan lacag la'aan, laakiin ugu yaraan aqoonsi. (Marnaba kuma xanuunayso resume).
Intaa waxaa dheer, naqshadaha kuwa la soo sheegay ayaa lagu iibin doonaa sidii naqshado gaar ah. Marka, awoodda naqshadaha ayaa ka muuqda mid kasta oo guuleysta. Xaaladdan oo kale waxaad u yeelan doontaa cabir adiga si aad naftaada ugu matasho jidka. In kasta oo sheegashooyinka hadhay aysan u baahnayn soo saar qasab ah shirkadda. Xuquuqdaan ayaa loo keydiyey haddii aysan kabaha u dhadhamin ama u qurxin shirkadda ay raadineyso.
Waxay muhiim u tahay dhammaan noocyada tartamada inay akhriyaan xeerarka tartanka. In kasta oo ay mararka qaarkood ku adkaan karto in la akhriyo tirada dhibcaha darteed, Waa wax xiiso leh in maskaxda lagu hayo haddii aan u baahanahay inaan sheegano wax xaqiiqo ah. Waa kuwan qodobbada ugu muhiimsan ee ay tahay inaad akhrido:
Go'aanka xeerbeegtida ayaa noqon doona kama dambaysta: Go'aanka xeerbeegtida ayaa noqon doona kii ugu dambeeyay mana awoodi karno inaan wax sheeganno.
Sheegasho kasta oo ka timaadda dhinacyada saddexaad waxay noqon doontaa mas'uuliyadda ka qaybgalayaasha.: Ka taxaddar haddii aad ku darto tixraac noocyo kale, way ku soo wargelin karaan iyadaana mas'uul ka ah abuureha.
Marka aad saxiixdo waxaad aqbashaa saldhigyada: Waa masuuliyadaada inaad ka ogaato saldhigyadan, maadaama adoo buuxinaya macluumaadkaaga oo aad dirto tartanka, waad aqbashaa
Wax ka beddelka saldhigyada: Shirkaddu waxay xaq u leedahay inay wax ka beddesho saldhigyada haddii looga baahdo tartanka Slowwalk
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Kaqeybqaad tartanka Slowwalk oo ku guuleys 1000 euro
Sidoo kale Pablo ayaa cadeeyay. "Tani waxay ku dhacaysaa murankii muranka dhaliyay ee Metro Madrid ee aan maalin dhaweyd ku qornay Creativos Online" Haddii aan aqrino maqaalkaas, waxaan ka hadlaynaa arintaas, markale, "muran". Markaa maahan inaan taageerno, laakiin xagga Creativos, waxaan ognahay inay jiraan dad badan oo u heellan qaabeynta qaab xirfadaysan oo akhriya qoraalladeenna. Marka waa muhiim in bulshadu ka warqabto tartamadan sidoo kale. Oo u isticmaal sida ku habboon. Tani maahan wax xayaysiis ah, maadaama uusan qofna lacag innagu siinin. Waa macluumaad uun. Mararka qaarkood waxay noqon doontaa qaab casharro ah iyo mararka qaarkood waxyaabo hadda jira oo ku saabsan naqshadeynta. Xaaladdan oo kale waa sidaas. Annagu isma dhigno. Xayeysiintu waa salka hoose ee bogga kafaala qaadayaasha doonaya in ay ku daraan calan websaydhka ah. Salaan Pablo!
Sida sawir loo kiciyo